Uninzi lwamabhemu aluxhaphaza ukuqhubeka kwe "Dark Knight" - uthathe iingxoxo eziqhaqhaqhayo zabaviwa kubadlali "ababi". Abadali befilimu kuthiwa baceba ukurhoxisa inzala yabo kwikamva ekuzaleni kwangaphambili ekuqaleni kuka-2009. Ngokutsho kweOKino.ua, ukuqala kofowuni kuhlelelwe ihlobo le-2009 e-Chicago.
Umsebenzi wokuqala emfanekisweni uhlelwe ngamaqhinga ukuqala ngoFebruwari 2009. Ukubonakala kwendlela eya kuba ngumcimbi waba yinto yokusebenza, iqwalasela impumelelo enkulu ye "Dark Knight", oqokelele izigidi ezingama-524.6 yezigidi kwisiseko selizwe lakhe kunye ne-984.6 zamazwe ngamazwe.
Isihloko sokuqala se "Batman 3" sivakala ngathi "I-Caped Crusade", kwaye kwi-tape entsha iya kubonakala yonke into ebalulekileyo yama-comics-ukusuka kwi-Mysterious to Catwoman. I-Rumor ithathelwe le nxaxheba ku-Angelina Jolie, uSher, uJohnny Depp noFilipu Seymour Hoffman, kodwa akukho namnye kubo oye waqinisekisa ngokuqinisekileyo isivumelwano sabo. I-Chaos ayikho kuphela ekukhutshweni, ngenxa yokuba isithuba somlawuli sinezithuba ezingenamntu - isivumelwano kunye noChristopher Nolan asisayinwa nanamhla.
Ezili-10 kwiindawo ezithandanayo kwihlabathi
Izipho kunye neengcinga zobugcisa kubasetyhini
Ukuphononongwa kwe-movie "I-Wall-I"
I-talisman eyomeleleyo yokuthanda i-feng shui
Iquinoa kunye ne-avocado kunye neziqhamo ezomisiweyo
Indlela yokuzolalisa umntwana okhalayo
Ukungabikho kwamanzi e-Urinary kwabasetyhini. Icandelo 1
Ukutya kwabantwana ngexesha lokugula
Kuthekani ukuba uthandana nomhlobo wakho omhle?
Iibhafini zokuhlamba izandla
UNatasha Koroleva uxhukisa isityholo kunye neefoto ezinqamlekileyo ukusuka kwibhedi
Indlela yokudweba ikati kwisinyathelo sepensile ngesinyathelo
Iifowuni zeenwele ezingaqhelekanga
Imozulu eSt. Petersburg ngoJanuwari 2017 - i-Forecast kwi-Hydrometeorological Centre